I-Makeup Remover Wipes, i-Baby Wet Wipes, i-Wet Wet Wipes enye-iLantian Bishui
Iglasi yeliso kunye neelensi ezosulayo
Isandla sokuhlanjululwa kweGel
Imigqomo yokusula iintsholongwane
Iipesenti ezingama-75 zotywala ziyosula
99.9% Ukubulala intsholongwane
Iilensi neeglasi zisule amanzi
Ukucoca iilensi kunye neiglasi
Isandla sokucoca iGel
Ukuhlanjululwa ngesandla kweGel yokubulala intsholongwane
Umenzi wobungcali kunye no-OEM
Vumelana ne-ASTM E2315-16 imigangatho
Sula i-Isopropanol ngama-70%
Iiglasi zamehlo, izikrini kunye nokucoca iilensi
Ukucoca okumanzi okucoca amanzi
Amava eminyaka engama-20 I-Tianjin Lantian Bishui Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2000 sineminyaka engama-20 sivelisa ingqokelela emanzi yokusula
Iziqwenga ezingama-2000000 ngosuku Imveliso yemihla ngemihla ifikelela kwizigidi ezi-2. Umzi-mveliso wethu unabasebenzi abali-120 kunye neworkshop yokuhlanjululwa ngeedigri ezingama-100,000.
Sigxile ekuveliseni nasekuthengiseni zonke iintlobo zokusula okumanzi, iitawusi zokusula utywala, izisuli zokuhamba ngenqwelomoya, izisuli zelensi, iitawuli zamaphepha kunye neepakethi zokutya, izinti zoqalo kunye nezinye izinto zeAeronautical .Kwangelo xesha, lishishini elijolise kwiindlela ezahlukeneyo zokusula.
Umenzi wobuchwephesha kwizicubu ezimanzi Sigxile ekuveliseni nasekuthengiseni zonke iintlobo zokusula okumanzi, iitawusi zokusula utywala, izisuli zokuhamba ngenqwelomoya, izisuli zelensi, iitawuli zamaphepha, izicwili ezomileyo .kanye nezinye iinkampani zeenqwelo moya .Ngalo xesha linye, lishishini eligxile ekususeni okusebenzayo okuhlukeneyo.
Abaxhasi bethu kulo lonke ihlabathi
Iinqwelomoya: I-United Airlines, i-China i-Air, i-Delta Air Lines, i-Air Berlin, i-Kazakhstan Airlines, i-Kenya Airways, i-Maldives Airlines, i-Libyan Airlines, i-Mongolian Airlines, i-Mongolian Airlines Group, i-Arabian Airlines, njl.
Nxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya okanye ubhukishe idinga
Igxile ekuveliseni nasekuthengiseni zonke iintlobo zokusula okumanzi, iitawusi zokusula utywala, izisuli zokuhamba ngenqwelomoya, iisuli zelensi, iitawuli zamaphepha kunye neepakethi zokutya, izinti zoqalo nezinye izinto zeAeronautical.
Lwedilesi: No.1 Langliang Road (Chengguan Icandelo), Chengguan Town, Wuqing District, Tianjin, China
Ifowuni kunye neWhatsapp: + 86-15922283155
Ukuza kuthi ga ngoku akukho mntu ubuqu kunye nomntu ngamnye ...
Iingcebiso: Iingcali ziphendula imibuzo ephambili malunga ...
Imveliso eshushu, Imephu yendawo, Iscreen sokuSula ngaBomntu sisongelwe, IiLens eziSulungekileyo, UkuCoca iiLisisi zeTishu, Ukucoca i-sunscreen,